Ihe kpatara na mgbaàmà nke meningitis. – Noor Health Life
Ihe kpatara na mgbaàmà nke meningitis.
A na-eme ememme ụbọchị meningitis n’ụwa niile na Eprel 24. N’ụbọchị a, a na-ahazi seminarị na ọgbakọ dị iche iche maka ịmara ahụ ọkụ a ka ndị mmadụ wee mara ihe mgbaàmà, ihe kpatara ya, ọgwụgwọ na mgbochi nke ahụ ọkụ a. A na-eme atụmatụ na ahụ ọkụ na-emetụta ihe karịrị otu nde mmadụ n’ụwa niile kwa afọ. Maningitis nwere ike imetụta ndị nọ n’afọ ndụ niile, ma ha bụ nwata ma ọ bụ okenye. Ọgwụgwọ n’oge dị ezigbo mkpa, ọ bụrụ na ahụ ọkụ ahụ erute n’ogo dị ize ndụ, ọ nwere ike igbu onye ọrịa ahụ, yabụ ịkpachara anya.
Ihe na-akpata maningitis
Ihe okike emeela nhazi kacha mma maka ụbụrụ mmadụ na cerebellum ma chekwaa ya na akpụkpọ anụ atọ nke na-eme ka ọ ghara ịdị ize ndụ na ọrịa dị iche iche. Ọbụna obere ọrịa na akpụkpọ ahụ ndị a na-ebute ọtụtụ ọrịa. Enwere ike imetụta akpụkpọ ahụ ndị a site na mmerụ ahụ nke isi, nje nje na-abanye n’ọbara, ọrịa imi na ntị, na meningitis.
Mgbaàmà nke maningitis
1. Na meningitis, onye nrịanrịa na-ebute oke ahụ ọkụ.
2. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ nwere ahụ ọkụ, ọ na-ebe ákwá mgbe niile.
3. Ọ dịghị ihe na-eme ka ị na-eri ma ọ bụ na-aṅụ.
4. Ka ahụ ọkụ na-akawanye njọ, onye ọrịa ahụ emetụtara na-amalite ịma jijiji.
5. ntụpọ uhie na-apụta n’ahụ.
6. Ugwu n’anya na-apụ n’anya, nkuanya na-eji nwayọ na-aga.
7. Otu n’ime ihe mgbaàmà kachasị mkpa bụ ịghara ịtụgharị olu, olu anaghị agwọ nke ọma na onye ọrịa enweghị ike ibuli olu, kedu ka ọrịa maningitis nwere ike ịdị n’ọdịnihu?
Geneva: Otu akụkọ nke Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) wepụtara gosiri na otu onye n’ime mmadụ ise ga-enwe nsogbu ịnụ ihe n’afọ ndị na-abịa n’ihi ọrịa maningitis na ihe ndị ọzọ.
Dị ka akụkọ mgbasa ozi mba ụwa si kwuo, otu akụkọ sitere n’aka Òtù Ahụ́ Ike Ụwa wepụtara gosiri na ọtụtụ ndị n’ụwa na-eche nsogbu ịnụ ihe ugbu a ihu.
Akụkọ nke Òtù Ahụ Ike Ụwa wepụtara
Dị ka ya si kwuo, mmụba nke maningitis na amaghị banyere ya nwere ike ịdị oke njọ n’ihi na ọrịa maningitis na-emetụta kpọmkwem na ịnụ ihe.
Dị ka ndị ọkachamara n’ịgwọ ọrịa si kwuo, ọrịa maningitis na-emetụta ụbụrụ ụbụrụ na mkpụrụ ndụ anụ ihe nke ukwuu, nke na-eme ka e bepụ ozi ahụ rute n’ụbụrụ.
Ndị ọkachamara WHO kwuru na a ga-edozi ọnọdụ a siri ike naanị site n’ibelata mkpọtụ n’ebe ọha na eze na inye enyemaka ahụike n’oge.
Akụkọ ntị nke mbụ zuru ụwa ọnụ nke WHO wepụtara na-ekwu na “n’ime afọ iri atọ na-abịanụ, ọnụ ọgụgụ ndị ntị chiri ga-abawanye karịa 1.5%, nke pụtara na otu onye n’ime mmadụ ise ga-enwe nsogbu ịnụ ihe.” ۔
Akụkọ ahụ na-ekwu na “mmụba a na-atụ anya na nsogbu ịnụ ihe bụkwa n’ihi mmụba nke igwe mmadụ, mmetọ mkpọtụ na usoro ọnụọgụ mmadụ.”
Akụkọ Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) kwukwara ihe na-akpata nhụsianya n’ihi enweghị nlekọta ahụike na enweghị ndị ọkachamara ahụike na mba ndị nwere obere ego.
Akụkọ ahụ na-ekwu na “80% nke ndị nọ na mba ndị dị otú ahụ nwere nsogbu ịnụ ihe, ọtụtụ n’ime ha anaghị enweta nlekọta ahụike, ebe mba ndị bara ọgaranya anaghị enweta nlekọta ahụike n’ihi mmụba nke ọnụ ọgụgụ mmadụ.” Biko Ị nwere ike email Noor Health Life yana ajụjụ na azịza ndị ọzọ. noormedlife@gmail.com